कंगनासँग बक्स अफिसमा टक्कर लिन चाहदैनन् ऋतिक, यस्तो छ कारण ! | जनदिशा
कंगनासँग बक्स अफिसमा टक्कर लिन चाहदैनन् ऋतिक, यस्तो छ कारण !
काठमाडौं, १७ भदौ । अभिनेता ऋतिक रोशनको आगामी फिल्म ‘सुपर ३०’ र उनका पूर्व प्रेमिका कंगना रनौतकी फिल्म ‘मणिकर्णिकाः द रानी अफ झाँसी’ को रिलिज मिति एउटै छ । यी दुवै फिल्म अर्को वर्षको २५ जनावरीबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आउनेछ । तर अहिले आएर अभिनेता ऋतिक रोशन भने आफ्नो पूर्व प्रेमिका कंगना रनौतसँग बक्स अफिसमा टक्कर लिन चाहँदैनन् ।
यी दुवै फिल्म एकैसाथ दर्शकमाझ रिलिज हुँदा दर्शकहरु बाँडिने र आशा गरे अनुरुप बक्स अफिसमा कलेक्शन गर्न सक्दैन भन्ने उदेश्यका साथ अभिनेता ऋतिकले आफ्नो आगामी फिल्म ‘सुपर ३०’ जनावरी २५ भन्दा अगावै रिलिज गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । अभिनेता ऋतिकले आफ्नो फिल्मको सुटिङ अगावै रिलिज मिति पनि घोषणा गरेका थिए ।
त्यस्तै केही समयपछि अभिनेत्री कंगनाले पनि आफ्नो फिल्मको रिलिज मिति सोही डेटलाई नै घोषणा गरिदिएकी थिइन् । मिड डे रिपोर्टका अनुसार अभिनेता ऋतिकले आफ्नो ‘सुपर ३०’लाई एक साता अगावै १८ जनावरीका दिन रिलिज गर्ने भएका छन् । ऋतिकको ‘सुपर ३०’ बिहारको गणितज्ञ आनन्द कुमारमा आधारिक कहानी हो । अर्को तर्फ अभिनेत्री कंगनाको फिल्म ‘मणिकर्णीका’ पनि झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाईमा आधारित हो ।
ऋतिकको ‘सुपर ३०’लाई विकास बहलले निर्देशन गरेका हुन् । यता अभिनेत्री कंगना रनौतकी फिल्म ‘मणिकर्णिका’ भने कृष जगर्लामुदीले निर्देशन गरेका हुन् ।
Previous Previous post: अब बेरोजगारलाई काम दिन नसके भत्ता !
Next Next post: आकस्मिक बाहेक आज देशभरका अस्पतालमा सबै सेवा ठप्प, काउन्सिलमा लाइसेन्स फिर्ता गर्ने कार्यक्रम पनि !